Miyaad Noqonaysaa Tababaraha Barcelona? Ronald Koeman Oo Maanta Si Cadaan Ah Su'aashaas Loo Weydiiyay & Jawaabtiisa - Gool24.Net
Miyaad Noqonaysaa Tababaraha Barcelona? Ronald Koeman Oo Maanta Si Cadaan Ah Su’aashaas Loo Weydiiyay & Jawaabtiisa
Tababaraha xulka qaranka Netherlands balse aadka loola xidhiidhinayo shaqada banaan ee kooxdiisii ciyaartoynimo ee Barcelona Ronald Koeman ayaa si toos ah loo weydiiyay haddiiba uu la wareegayo jagada ka banaan wakhtigan Camp Nou.
Barcelona ayaa xalay si rasmi ah u caydhisay Quique Setien oo maalmihii ugu dambeeyay oo dhan la ogaa inay tirsan yihiin saacadaha uu baaqisa kusii ahaanayo shaqadaas kaddib qaab ceeb ah oo ay uga hadheen Champions League.
Barcelona ayaa markii ugu horreysay tan iyo 1946 laga dhaliyay 8 gool hal kulan waxaana bahdilka intaas leeg u geysatay kooxda ree Germany ee Bayern Munich oo natiijo 8-2 ah kaga reebtay tartanka heer kooxeed ugu xiisaha badan.
Haddaba, Koeman oo ay warbaahintu qorayso inuu yahay tababaraha ugu cad cad shaqada Barcelona ayaa maanta la weydiiyay xaqiiqada wararkaas isaga oo ku sugnaa xarunta guud ee xidhiidhka kubadda cagta Holland.
Koeman ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu shaqadaas la wareego balse uusan hadda wax badan sheegi karin ilaa ay waxkasta xaqiiqo noqdaan.
“Anigu wax badan ma odhan karo haatan” ayuu ku jawaabay tababarihii hore ee kooxaha Southampton iyo Everton oo wax laga weydiiyay jagada tababarenimo ee lala xidhiidhinayo.
“Haa, waan jeclaan lahaa (Inaan noqdo tababaraha Barcelona), taasi way caddahay, waxa ay noqon lahayd riyo rumawday, laakiin waxa ay kaliya hubaal tahay marka uu heshiis jiro iyo saxeexyada waraaquhu”